Soso-kevitra momba ny fananganana lisitra mailaka sy fanombohana amin'ny fampivoarana amin'ny aterineto
Manana lisitra mailaka ahafahanao manomboka vola. rehetraNy fangatahana dia mailaka iray manolotra vokatra vaovao izay tianao hampiroboroboanao, ary afaka manana anaobola be dia be, fa raha tsy vitanao ny manangana lisitra lehibe. Semalt manam-pahaizana Digital Services,Michael Brown dia mizara torohevitra mahasoa momba ny fomba hanombohana amin'ny varotra an-tserasera.
Eritrereto hoe nahazo vaovao momba ilay vaovao ianaovokatra, izay hitanao fa sarobidy sy mahasoa. Mailaka tsotra nalefa tany amin'ny lisitr'ireo olona 10 - unmetered 1000mbps.000 miaraka amin'nyNy tahan'ny fifampiresahana amin'ny 5% dia miteraka vokatra 500. Raha heverinao fa mahazo tombony amin'ny vidin'ny $ 10 ianao,izay fanombanana be mpandala ny nentin-drazana, dia mety hahazoana $ 5.000 ianao ao anatin'ny iray andro, raha kely indrindraamin'ny ora fiasana. Mbola tsy azo antoka ve ny fananganana lisitra mailaka?
Mazava ho azy, ny lisitry ny mailaka 10 000 dia isa lehibelisitra, izay haka volana vitsivitsy hananganana, noho izany dia mila manomboka miasa ianao anio, fa tsy rahampitso. Thehaingana kokoa ianao manomboka manangana ny lisitra, ny haingam-pandeha dia hiverina hipetraka ianao, alefaso mailaka momba ny vaovaovokatra, ary mahazo bebe kokoa amin'izany ora izany mihoatra noho ny mahazatra anao mandritra ny iray volana.
Ny tombony amin'ny lisitry ny mailaka
Ny fahombiazan'ny fitantanana mivantana
Fahalalahana handinihana ireo tsindrysy ny dingana lehibe hafa izay hanampy anao hampiasa paikady mailaka
Fanorenana trano sy fahatokisana amin'ny fanomezana ny lanjany amin'ny fotoana
Fiovan'ny avo kokoahananganana fifandraisana misy eo amin'ny lisitry ny mailaka
Anisan'ny faritra manan-danja amin'ny fananganana mailakalisitra no mitazona ireo mpampiasa anao. Tena mahazatra ny mpamaky mamaky ny fisoratana ny "famporisihana" malalaka azy ireo.ary avy eo dia esory amin'ny lisitry ny mailaka manaraka. Tokony ho afaka hanome lanja azy ireo ianaoMandritra ny fifanakalozanao mailaka, raha tsy izany dia veloma amin'ny asa mafy ataonao sy ny tombony amin'ny ho avy ..
Ny fanentanana ara-barotra amin'ny mailaka rehetra dia mikasika izanyny fomba fiasa marina. Eritrereto ny mailaka rehetra azonao isan'andro ary nahoana ny sasany amin'izy ireo no tratranaony fifantohana sy ny hafa dia nofafana. Misy siansa ahafahan'ny mpampiasa tombotsoa sy fitokisana amin'ny alalan'nymailaka tsotra. Io no fahasamihafana misy eo amin'ny "spam" azonao ary ny mailaka izay tsindrianao mba hahafantarana bebe kokoa momba izany.
Ireo hevi-dehibe tokony hotsaroana rehefa manorina ny lisitra
Mamoròna fahatokisana amin'ny famoahana ny fahaiza-manaony sy ny lanjany eo amin'ny lasibatra
Manentana ny fihetseham-pony amin'nymamorona tantara izay mahaliana ny mpamaky
Mamoròna ny tantaranao amin'ny lojika tena izy toy nyfijoroana vavolombelona mba hahatonga azy ireo ho liana kokoa
Tena ilaina ny miresaka mivantana amin'ireo mpanjifanao.Fantatrao ny antony nanaovany sonia, dia lazao amin'izy ireo amin'ny fomba izay hisarika ny sainy. Tsy misy olona tia mailakaizay miresaka momba ireo lohahevitra tsy misy dikany, dia mandehana haingana sy mivantana avy hatrany. Lazao amin'izy ireo tantara iray izay izy ireodia afaka mifandray amin'ny. Izany dia mahatonga ny fihetseham-po ho tonga eny ambonin'ny tany, izay tena tadiavinao.
Ny fomba tsara indrindra hananganana lisitra mailaka dia ny fampiasanareputable auto responder. Azonao atao ny mametraka mailaka maody maoderina mandritra ny herinandro, ary rehefa vita izany,Tsy mila manao na inona na inona ianao. Maro ny safidy, saingy ny Aveber no tena heverina ho heverina ho ambony. EryNy famporisihana hitady safidy maimaim-poana na mora kokoa fa ny olana amin'izany dia mety ho voafetra ihany ny mailakaoho iray isan-kerinandro, na hiafara amin'ny boaty spam.
Tokony ho tsy azo resena ny laharam-pitarihana mailakaary hahazo tombony amin'ny fahalianan'ny tsirairay. Ny fampahalalana ny tantara dia tena ilaina mba hisambotra ny sainy ary hametraka azy ireo amin'ny loha-hevitraony fisainana. Ny fianarana misimisy kokoa momba ny famoahana kopia dia hanampy anao hamoaka mailaka sarobidy izay ahafahan'ireo mpamaky anao mamaky sy maniry.
Tsarovy ny manangana fitokisana amin'ny lisitra mailaka alohanaoManomboka vokatra fanodinana ianao ary maniry ny varotra. Avy amin'ny fahatokisana ny manampahefana, ary izany no mamela anao hivarotra amin'ny ho avy.
Ataovy azo antoka fa hilaza amin'ny mpamaky izay hatao ianao. izanydia mety hanohitra mifanohitra, saingy ny fanadihadiana dia manaporofo fa ny filazana olona iray hanao zavatra iray dia mandray valiny tsaratsara kokoa noho nymangataka azy ireo hanao zavatra. "Hifanaraka amin'ny fampiofanana 1-ny-1" dia ho sahirana kokoa noho ny hoe "Te-hisoratra anarana amin'ny fiofanana 1-on-1 ve ianao?".
Antenaina fa hanampy anao hianatra ity lahatsoratra ityzavatra na roa momba ny fananganana lisitra mailaka. Ny zavatra manan-danja indrindra dia ny hoe tsy afaka miandry ianao vao manomboka. Izany dia avyTena zava-dehibe ny manomboka avy hatrany amin'ity asa ity. Raha manana fisalasalana ianao dia jereo Semalt Fanolorana nomerikaKa dia hanao zavatra mazava ho anareo izahay.